ओलीलाई जसपाको मत ! - Nepal Samaj
ओलीलाई जसपाको मत !
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतबार गराएपछि जसपा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
‘सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ?’ भन्ने विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला पार्टी नै विभाजन हुने स्रोत बताउँछ । ठाकुर, महतो समूह ओली सरकारप्रति सकारात्मक र यादव, भट्टराई, राई समूह विपक्षमा उभिएपछि पार्टी विवाद बढ्दै गएको छ ।
२ सय ७५ सदस्यको प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ सिट छ । कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ ९पार्टी छाडेका चार पदमुक्त भएपछि०, जसपाको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १÷१ सिट रहेको छ । कांग्रेसका दुई र जसपाको दुई सांसद निलम्बित छन् ।
उता, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ‘ङ्खलोर क्रस’ गर्ने सम्भावनासमेत बढेको चर्चा पार्टीभित्र जारी रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।